နောက်ကျောများတွင်မီးရထားသာမန်ထက်လောကီသားတို့သည်အဖို့ခရီးသွားများအတွက်မိတ်ဆက်တဲ့ရထား 1982 ယနေ့ခေတ်ဥရောပခရီးသွားများနှင့်ဇိမ်ခံရထားများပရိတ်သတ်များအတွက်နံပါတ်တစ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက်ကျော်လွန်ပြီးရထားဇိမ်ခံကားကိုခံစားချင်သူမည်သူမဆိုသည်, ဗင်းနစ် Simplon Orient Express ကိုထိုသို့ပြုမှလမ်းဖြစ်၏. အများဆုံး ကျော်ကြားခရီး ဒီဇိမ်ခံထွက်ပေါက်၏လန်ဒန်နှင့်ဗင်းနစ်များအကြားဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, များစွာသောအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်ဘာလင်မှထပ်မံသွားမဆီးတားနိုင်ပါတယ်, နှင့် ဘာလင်ကနောက်ဆုံးစတင်ရပ်တန့်ဖြစ်ခြင်း ရထားများအတွက်. သင်ဒီရထားစီးတဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏အစားအစာနှင့် 5-ကြယ်ပွင့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုတည်းနှင့် shared အစုံအလုပ်လုပ်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးစားဖိုမှူးအချို့ရှိ.
စစ်မှန်စွာတော်ဝင်အစဉ်အလာမှတက်အသက်ရှင်တစ်ဦးကရထား, Belmond တော်ဝင် Scotsman တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်ပြီ. ထိပ်အကြားတွင်ဖြစ်ခြင်း3ဇိမ်ခံရထား, Belmond သငျသညျကိုခစျြပါလိမ့်မယ်လမ်းကြောင်းများအခြေတည်ထားပါတယ်. ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည် Scotch Malt ဝီစကီ Trail, အနောက်တိုင်းရှုခင်းသာအံ့ဖွယ်, စကော့တလန်ရဲ့ဂန္ထဝင် Splendours, Dale ရအေိုငျမြား & ဥယျာဉ်, နှင့်အများကြီးပို. spa န်ဆောင်မှုများ Belmond ဝါကြွား, အဖြစ်ကောင်းစွာ!4ရက်ကြာအဘိဓါန် Highland Classicmost လူကြိုက်အများဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. ရထားကနေပြေး ဧပြီလ အောက်တိုဘာလမှ, ထိုသို့အများအပြားလုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သာယာလှပရှုခင်းများကိုဖုံး, Skye ၏ကျွန်းအပါအဝင်. ပြန်ထိုင်နှင့်ကြီးမားသောဖန်ပြတင်းပေါက်များကဖြေလျော့, အဆိုပါအချို့ကိုအပေါ် SIP အကောင်းဆုံးဝိုင် နှင့်စမ်းစကော့တလန်သောအလှတရားကျော်.
ဥရောပသို့ခရီးစဉ်၌ဇိမ်ခံရထားများနှင့်၎င်းကိုယ်တိုင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိသည်, ဒါပေမယ့်ဒီရထားတွေထဲမှာဥရောပကိုသွားတဲ့ခရီးဟာအရာတိုင်းပါပဲ. မည်သည့်ရထားစီးနင်းမှုအတွက်မဆိုတစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာအပြန်အလှန်သွားရန်လက်မှတ်ဝယ်ပါ တစ်ဦးကရထား Save နှင့်ဥရောပခံစားစတင်ရန်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီမှာလုပ်နိုင်: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-luxurious-trains%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)